ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ (ကျား/မ)စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
စက်တင်ဘာ ၂၈ (ပဲခူး) =================== ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံစက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး စက်တင်ဘာလ(၂၈)ရက်နေ့ နံနက်(၆)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ အသက်(၁၈)နှစ်အောက် (ကျား/မ)စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုးရုံးရှေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ရွှေက သေနတ်ပစ်ဖေါက်၍ စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲအား ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ ပဲခူးခရိုင်မှ(၁၃၅)ဦး၊ တောင်ငူခရိုင်မှ(၁၈)ဦး၊ ပြည်ခရိုင်မှ(၁၉)ဦး၊ သာယာဝတီခရိုင်မှ(၂၃)ဦး စုစုပေါင်းကျောင်းသား/သူ(၁၉၅)ဦးတို့က တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုးရှေ့မှ ပဲခူးတက္ကသိုလ်အနီး ချင်းစုအထပ်သားစက်ရုံလမ်းဆုံအထိ (အသွား/အပြန်) စက်ဘီးယှဉ်ပြိုင်စီးကြသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား/သူများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန်၊ ဘက်စုံထူးချွန်သော ကျောင်းသား/သူများပေါ်ထွက်လာစေရန်၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အားကစားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ အသက်(၁၈)နှစ်အောက် (ကျား/မ)စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက် ဆုပေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရာ (ကျား/မ)ပထမဆုရရှိသော မောင်အောင်စိုး အထကခွဲ(၁) တောင်ငူနှင့် မဝတ်ရည်စိုး အထကခွဲ ညောင်လေးပင်တို့အား စီမံကိန်းနှင့် …
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေလာရောက်လှူဒါန်း
စက်တင်ဘာ ၂၇ (ပဲခူး) ============ စက်တင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)အချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးခန်းသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ပြင်ပကုမ္ပဏီ(၃)ခုမှ အလှူငွေများ လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ Japan Overseas Technical Supprot Institution Co., Ltd မှ အလှူငွေ ကျပ် သိန်း(၃၀)၊ Uniho Tomosada Co., Ltd မှ အလှူငွေကျပ်သိန်း(၃၀)နှင့် Myanmar – Japan Social Economic Development Association မှ အလှူငွေကျပ်(၅)သိန်း၊ စုစုပေါင်း အလှူငွေကျပ် (၆၅)သိန်းအား လာရောက်လှူဒါန်းရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အလှူငွေလှူဒါန်းပွဲသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ ဥပဒေချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အလှူရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း …
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ နတ်သံကွင်းစျေး ပြန်လည်တည်ဆောက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့စစ်ဆေး
စက်တင်ဘာ ၂၆ (ကျောက်ကြီး) =================== စက်တင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့၊ ညနေ(၄:၃၀)အချိန်က ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းသည် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်ရှိ နတ်သံကွင်းစျေး ပြန်လည်တည်ဆောက်နေမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ စျေးတည်ဆောက်ရေးရှင်းလင်းဆောင်၌ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်လျက်ရှိသော AH MAY MYTTAR Co., Ltd ၊ တည်ဆောက်ရေးအင်ဂျင်နီယာမှ စျေးတည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ်က စျေးတည်ဆောက်ရာတွင် မြို့ပြလူနေထိုင်မှု အခြေအနေ၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေအနေများအပေါ် တွက်ချက်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စျေးပတ်လမ်းအား အရေးပေါ်ယာဉ်များ ဝင်/ထွက်နိုင်ရန်၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်၊ မီးသတ်ရေကန်၊ အမှိုက်ကန်၊ အများသုံအိမ်သာစသည့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကန်ထရိုက်တာများအနေဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို စေတနာထားပြီး စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တည်ဆောက်သွားရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်ရှိ …
ကမ္ဘာ့ကျောင်းများ နို့တိုက်ကျွေးရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် မူလတန်းကလေးငယ်များအား နို့နှင့်ကြက်ဥများတိုက်ကျွေး
စက်တင်ဘာ ၂၆ (ပဲခူး) ============== ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှကြီးမှုးပြီး စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၂)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ သီရိပညာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့ကျောင်းများ နို့တိုက်ကျွေးရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် မူလတန်းကလေးငယ်များအား နို့နှင့်ကြက်ဥများ တိုက်ကျွေးပေးကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးအောင်ဇော်နိုင်က အမှာစကားပြောကြားပြီး မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုး ဒေါက်တာဝင့်သူက ကမ္ဘာ့ကျောင်းများ နို့တိုက်ကျွေးရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကာ ဝန်ကြီးနှင့် တက်ရောက်လာကြသူများက မူလတန်းကလေးငယ်များအား နို့နှင့်ကြက်ဥများ တိုက်ကျွေးပေးကြသည်။ နွားနို့သည် မိခင်နို့ပြီးလျှင် အာဟာရဓာတ် အကြွယ်ဝဆုံးဖြစ်သည်၊ နွားနို့သည် အရိုးနှင့် သွားများကိုခိုင်မာစေပြီး အစာကြေညက်လွယ်စေသည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နွားနို့တွင် Lactose၊ Enzymes၊ အဆီများ၊ သတ္တု ဓာတ်များ၊ Vitamins၊ Proteinများပြည့်စုံစွာပါဝင်ပြီး ကလေးများသာမက လူကြီး၊ …
မြစ်ချောင်းများအား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ကမ်းပါးထိန်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြ
စက်တင်ဘာ ၂၅ (ပဲခူး) =========== စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဧည့်ခန်းမသို့ Super Rainbow Construction Ltd ၏ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံပိုင် Terre Armee Co., Ltd မှ မြစ်ချောင်းများအား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ကမ်းပါးထိန်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးသန့်စိုးက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၌ တွံ့တေးတူးမြောင်း မြေထိန်းနံရံများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများတွင်လည်း မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံများတည်ဆောက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့၏ နည်းပညာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြေထိန်း/ရေထိန်းနံရံများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုသက်သာပြီး၊ ရေရှည်ခံနိုင်မှုရှိပါကြောင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုမရှိပါကြောင်း Power Point ဖြင့် …
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်မှုဇုန်တစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လာရောက်ကမ်းလှမ်း
စက်တင်ဘာ ၂၅ (ပဲခူး) ================== စက်တင်ဘာလာ (၂၅)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဧည့်ခန်းမသို့ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်မှုဇုန်တစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် Zillionier Trading Co., Ltd ၏ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်၊ မြန်မာကျဲ့ကျန်း ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Tu. Guoding ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ သည်။ ရှေးဦးစွာ Mr. Tu. Guoding က ပဲခူးဒေသအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ တရုတ်နိုင်ငံမှ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်မှုဇုန်တစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန် လာရောက်ကမ်းလှမ်းရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါက ဒေသခံပြည်သူ (၁)သိန်းမှ (၆)သိန်းအထိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ ဖန်တီပေးနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးထုတ်ကုန်၊ …
ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ သိုင်းဝကျေးရွာတွင် အမြန်လမ်းပတ်လမ်း ဖောက်လုပ်ရန်၊ ဆွာမင်းလမ်းကျေးရွာရှိ ရေဘေးကြောင့် ပြိုလဲ/ပျက်စီးနေအိမ်များ အသစ်ဆောက်လုပ်ပေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး
စက်တင်ဘာ ၂၂ (ရေတာရှည်) ==================== စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁:၃၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းသည် ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးဘေးရှိ သိုင်းဝကျေးရွာ၌ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် ပတ်လမ်းဖောက်လုပ်မည့် အခြေအနေအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ရာ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးဇော်ထွန်းက လမ်းဖောက်လုပ်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများ အားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ဆွာမင်းလမ်းကျေးရွာ၊ သုခကာရီ အာရုံခံဇရပ်၌ ကျေးရွာနေပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဝန်ကြီးချုပ်က ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲပဲ့ကျမှုကြောင့် ပြိုလဲ/ပျက်စီးခဲ့သည် နေအိမ်(၁၉)လုံးအတွက် အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်မြေဧရိယာ (၈)ဧကနှင့်ပတ်သက်၍ လူထုဆန္ဒနှင့်အညီ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက နေအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာနေပြည်သူများအနေဖြင့် အခမဲ့ရရှိစေရန် လာရောက်လှူဒါန်း ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး …
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း (ဆွာချောင်းတံတား) ရေလယ်တိုင်နိမ့်ကျနေမှုနှင့် ဆွာချောင်း ရေလှောင်တမံ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ဒုတိယသမ္မတ(၂)နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး
စက်တင်ဘာ ၂၂ (ရေတာရှည်) ========================= စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၃၀)အချိန်က ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းတို့သည် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း (ဆွာချောင်းတံတား) ရေလယ်တိုင်နိမ့်ကျနေမှုနှင့် ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မြင့်လှိုင်မှ ဆွာချောင်းတံတား ရေလယ်တိုင်နိမ့်ကျမှုအပေါ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ၊ ဒုတိယသမ္မတက တံတားပြန်လည်ပြုပြင် ရာတွင် ရေရှည်ခိုင်ခံမှုရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယသမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ရှင်းလင်းဆောင်၌ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မြင့်လှိုင်မှ ယာယီကျောက်ဖြည့်တမံ တည်ဆောက်နေမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ၊ ဒုတိယသမ္မတက ရေပိုလွှဲ အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်မည့်နေရာအား …